Rainbow taajirnimo duntu of Gold Rainbow taajirnimo duntu of Gold
Barcrest ayaa sii daayay ugu dambeeyey ee taxanaha ah ee Rainbow taajirnimo, naadi, ee maal Rainbow: Duntu ee booska Gold. Kulankaan ayaa theme ah Irish sida kuwii hore oo uu leeyahay muuqaalada bonus xitaa more. Tan iyo markii ay tani tahay a maal ciyaarta No Deposit baahan yahay Rainbow aad this ciyaari kara xorriyadda oo aan ka werwerayn oo ku saabsan lacagta deebaajiga. Afyare The faanaa of a 100 paylines ay weheliyaan soo diyaariyeen balaadhan oo ah muuqaalada bonus in loo xidho si ay u sii ciyaartoyda ugu faraxsanahay.
Barcrest waa horumariyaha ah ciyaarta Afyare in uu yahay qayb ka mid ah Games Corporation Sayniska ah. Waxaa hadda ka shaqeeya ku saabsan 20,000 mishiinada UK
The maal ciyaarta No Deposit baahan yahay Rainbow ayaa 5 duntu iyo 100 paylines. Ciyaarta waa playable ka yar intii 50p per wareejin in ay sida ugu badan ee 100 £ per wareejin. Heerka RTP The kala duwan 94% iyo 98%. Kulanka waa mid fantastik ah u ciyaaro haddii aad raadinayso qaar ka mid ah xiiso weyn on miisaaniyad hooseeyo.
Ciyaarta ayaa waxaa si aad u wanaagsan loogu talagalay la Calaamooyinka inta badan isagoo theme la xiriira. Waxaad leprechauns, horseshoes, toadstools, rainbows iwm. Waxaana jira caadiga ah calaamadaha kulan card in alla intii qalbigooda, dheeman iwm kuwaas oo iman midabbo kala duwan. The calaamadaha Kaapelitalo leeyihiin qiimo ka sarreeya calaamadaha kaarka.
Afyare waa hodan la muuqaalada. Waxaad saddex nooc oo kala duwan oo bonus qoreysa ka astaanta duurjoogta ah marka laga reebo. First, halkaas waxaa jooga wareega dhigeeysa free kaas oo ka dhashay kala firdhiso buufinka ee ku. Halkan waxaad ka heli ikhtiyaarka ah in ay qaado mid ka mid ah afar doorasho qarsoon. Tirada dhigeeysa free waxaad ka heli waxay ku xiran tahay ikhtiyaarka aad doorato. Halkan waxaad ka heli kartaa ilaa 100 dhigeeysa free. Sidoo kale, this isagoo maal ciyaarta No Deposit baahan yahay Rainbow aad laga yaabo inuu ku guuleysto ka dhigeeysa free weyn.
Next, waxaa jira bonus cirfiid oo la kala sooc lahayn kiciyay. Waxaa jira toddoba gunooyin kala duwan oo ka mid ka mid ah la siiyo waqti. gunooyin ka mid noqon kara wilds dheeraad ah, laablaabi, dhigeeysa free iwm.
Ugu dambayntiina, waxaa jira fursad u Big bet taas oo ah bonus default wareega ah in kulan kasta Barcrest. Waxaad abaalmariyey 5 dhigeeysa lala muuqaalada dheeraad ah sida wilds more, calaamado dheeraad ah Kaapelitalo iwm.
Oo kuwan oo dhan weheliso xaqiiqda ah in this waa ciyaar No Deposit baahan yahay Rainbow maal ka caawin kartaa in aad ka tago ciyaarta ka taajirsan yahay marka hore aad ahaayeen marka aad bilowday u ciyaaro.
taajirnimo Rainbow: Duntu of Gold weli ugu wanaagsan ee taxanahan Rainbow ka Barcrest. Waxay leedahay dhan ah maaddooyinka ku jira qadarka saxda ah si ay u sameeyaan booska xiiso xajiya aad ugu soo laabtay ka badan. Sabab kale waa in aad isku daydo waa ciyaar taajirnimo No Deposit baahan yahay Rainbow. Sidaas heli online oo siiyaa wareejin ah.